Ukuthatha amanqaku kwiGalaxy Tab akukho nto ibhetele kuneBluetooth Stylus | I-Androidsis
Enye yezi zixhobo ziye zaba nefashoni njengeepilisi ziyeza kwaye nangona kukho iipilisi ezimbalwa kwimarike Galaxy Tab, esiye sabhekisa kuyo, yahlukile kwezinye izinto ezimbini ezibalulekileyo, apho ibandakanya i-Android kwaye yeyokuqala ukuza noluhlu lweenkcukacha zangaphakathi ezinomdla.
Kungenzeka njani ukuba ngenye indlela aba kumkani batsha beemarike bahamba nazo zonke iintlobo zezincedisi kunye naye Galaxy Tab Sele sibonile kumhla wayo, nangaphambi kokudibana nethebhulethi, ezinye zazo ziya kubandakanya. Namhlanje kukho enye into enokuba yeyona iluncedo kakhulu, yi Stylus . Olu ncediso kwiTab luyathengiswa kwivenkile yase-Bhritane ekwi-intanethi ngexabiso elingathethekiyo leepawundi ezingama-49,99, ezingezizo "izipho" xa umntu ecinga. ISylus iqhagamshela ngonxibelelwano lweBluetooth kwaye singabhala kwithebhulethi ngokungathi sibhala ephepheni, okanye kufanelekile.
Kwakhona kwiwebhusayithi esemthethweni yemveliso yaseSpain ukuba ubhalisa kwaye uthenge i-Galaxy Tab xa iqhubeka nokuthengisa bakunika ikhibhodi yokuqhagamshela kwithebhulethi. Isinyathelo esihle.
Phakathi kwebhodibhodi, ipeni, itshaja, ityala, intambo, iadaptha yokutshaja emotweni, njl ... ekugqibeleni sichitha ngaphezulu kwizinto zoncedo kuneendleko zesixhobo Kwaye ngokuqinisekileyo kuyakuhlala kukho ingxoxo malunga nokuba yeyiphi ithebhulethi kwaye kutheni kungenayo incwadi yenethiwekhi okanye ilaptop ekugqibeleni eyenza ngokufanayo, okanye mhlawumbi nangakumbi. Siza kushiya oku kuye ngokokubona komntu ngamnye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Ukuthatha amanqaku kwiGalaxy Tab akukho nto ingcono kuneBluetooth Stylus
I-Droid ekude, lawula ikhompyuter yakho kude nesiphelo sakho se-Android
gReader, umfundi wesondlo we-Android ehambelana ngokupheleleyo nabaFundi bakaGoogle